घट्यो सार्वजनिक विदाका दिनहरु ; दशैं विदा ३ दिन घट्यो अरु कुन-कुन काटिए ? (सूचीसहित) | Jukson
चैत्र १५, पोखरा ।
विश्वाका हरेक देशको राष्ट्रिय दिवस (नेशनल डे) भएजस्तै नेपालको पनि असोज ३ गते राष्ट्रिय दिवस कायम भएको छ ।
राज्यमन्त्री बास्कोटाले भने, ‘ऋषि पञ्चमी भनेको महिलाले पतिको गोडाको पानी खाने दिन भनिन्छ, महिलालाई दासत्व स्वीकार गर्न राज्यले किन बिदा दिने ? जनैपूर्णिमामा जनै लगाउने हो बिदा किन चाहियो ? आआफ्ना परम्परागत कार्य गर्न विदा चाहिँदैन ।’
अब नेपालभर वर्षभरी ५२ वटा शनिबार र अन्य १५ दिन सार्वजनिक विदासहित राष्ट्रव्यापी रुपमा ६७ दिनमात्र विदा हुनेछ । अन्य पर्वहरुमा २२ दिन आंशिक विदा हुनेछ ।
विद्युत चुहावट गर्ने मिललाई रु दुई लाख जरिवाना
कौडा गीत सोल्टिनी सार्वजनिक (भिडियो सहित)
अब स्वदेशमै छात्रले नर्सिङ पढ्न पाउने अवसर